प्रकाशित : आइतबार, चैत २९, २०७७२१:३५
फिल्म । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण बलिउड तथा हलिउडका फिल्महरुले रिलिज डेट हेरफेर गरिरहेका छन् । हलिउडको फिल्म नो टाइम टु डाइ रिलिज अन्यौल छ भने ब्ल्याक विडो हलसँगै ओटीटीमा रिलिज हुदैछ । बलिउडकै केहि फिल्महरु डिजिटल प्लेटफर्ममा मात्र उपलब्ध छन् । यद्दपी साउथ इण्डियन फिल्महरु भने हलमै रिलिज भइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको कारण बन्द रहेको हलमा दर्शक फर्काउने श्रेय साउथ इण्डियन फिल्म ‘मास्टर’ लाई गएको थियो । यस्तै पछिल्लो समय साउथकै अर्को फिल्म ‘वकिल शाब’ ले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । साउथ फिल्मका स्टार पवन कल्याणले अभिनित फिल्मले रिलिज भएको दुइ दिनमै ६५ करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ । फिल्ममा पवनलाई दर्शकले वकिलको भूमिकामा रुचाएका छन् । फिल्मले नेट कलेक्सन ५६.५० करोड गरेको हो ।
बोनी कपूर र दिल राजू मिलकरको संयुक्त निर्माण रहेको फिल्ममा निवेथा थोमस, अंजली र अनन्या नागला मुख्य भूमिकामा छन् । यो फिल्म सन् २०१७ मा रिलिज भएको फिल्म ‘पिंक’ को रीमेक हो । तर , यसमा प्रस्तुतीकरण साउथ शैली छ । (एजेन्सी)
#VakeelSaab Saturday- ₹ 17.50 cr nett, ( 20.12 cr gross) . Two days total stands mammoth- ₹ 56.50 cr nett ( ₹ 65 cr gross) INDIA BIZ . #PawanKalyan
— Sumit Kadel (@SumitkadeI) April 11, 2021
‘अर्जुन रेड्डी’ बन्दा यस्तो देखिए शाहिद (भिडियो)
अमिताभले गरे १ लाख प्राविधिकलाई सहयोगको घोषणा